င်ငံရပ်ခြားက ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအကြောင်း-ဒီဂျပန်ဇာတ်ကားတွေကို သင့်မွေးရပ်မြေမှာ ရိုက်ထားတာများဖြစ် နေမလား။ | Japanese Film Festival
TOP > ALL > LIFESTYLE TRAVEL	> င်ငံရပ်ခြားက ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအကြောင်း-ဒီဂျပန်ဇာတ်ကားတွေကို သင့်မွေးရပ်မြေမှာ ရိုက်ထားတာများဖြစ် နေမလား။
ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားတွေအကုန်လုံး ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲ ရိုက်ကူးတာတော့မဟုတ်ပါ!
ဂျပန်ဇာတ်ကားတွေဟေ့လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အကုန်လုံးဂျပန်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲဇာတ်အိမ်တည် ပြီးရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်မှာပါလို့ ကျွန်မတို့ထင်လိုက်မိမှာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဒေသတွေမှာ ရိုက်ကူးခဲ့ ရတဲ့ ဂျပန်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရော သင်သိပါသလား။
ပည်ပမှာရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ ဒီဇာတ်ကား ၃ ကားအကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ဒီဇာတ်ကားတွေထဲ သင်မှတ်မိ နေတဲ့ နေရာဒေသတွေများ ပါနေဦးမလား။
၁။ ပင်လယ်ကလာခဲ့သူ The Man from the Sea (海を駆ける), 2018
ဒီကားရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ကိုဂျီဖူကာဒါ (Koji Fukada) ဆိုတာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ တက်သစ်စလူငယ် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေ၊ အနုပညာပွဲတော်တွေမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးလုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ ရာဇဝင်ရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရဲ့သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ ဆာယိုနာရာ (Sayonara) ဇာတ်ကားထဲမှာ အမေရိကန်အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးကို ပါဝင်သရုပ်ဆောင်စေခဲ့သလို ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထွက် Au Revior L’Ete ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်က	ားအပါအဝင် အခြားဇာတ်ကားတွေကိုလည်း ပြင်သစ်ဟန်နဲ့တင်ဆက်နိုင်ဖို့ စွမ်း ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါတွေက သူနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရုပ်ရှင်တွေသွားရောက်မရိုက်ကူးခင်ကတည်းက လုပ်ဆောင်နေခဲ့ တာတွေဖြစ်ပြီး အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ‘ပင်လယ်ကလာခဲ့သူ’ (Man from the Sea, 2018) လို့အမည်ရတဲ့ ဇာတ်ကားကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အာ့ချေစီရင်စုထဲမှာရှိတဲ့ ဘန်ဒါအာ့ချေဒေသမှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ရိုက်ကူးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ဆူနာမီမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ ဂျပန်အမျိုးသမီးဖြစ်သူ တာကာကို (Takako) က ဒေသရဲ့ ကပ်ဘေးသင့် ပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဘယ်ကမှန်း မသိ ရေမျောကမ်းတင်ဖြစ်လာပြီး သတိလစ်မေ့မျောနေသူတစ်ဦးအကြောင်းကို ကြားသိရလိုက်ရပါတယ်။ (ဒီဇာတ်ရုပ် ကိုတော့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒင်းန်ဖူဂျီအိုကာက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်) ဒီလူက ဂျပန်စကားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားစကားနှစ်မျိုးလုံးကို မတောက်တခေါက်ပြောတတ်ပေမယ့် သူဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပဟေဠိဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ တာကာကိုက သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားလို ပင်လယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ လော့တ် (laut) ဆိုတဲ့နာမည်ကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လော့တ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မထင်မှတ် လောက်အောင် ထူးဆန်းတာတွေ တစ်ခုခုပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ မှာတော့….
သရုပ်ဆောင်: ဒင်းန် ဖူဂျီအိုကာ (Dean Fujioka), တိုင်ဂါ (Taiga), ဂျွန်ကို အေဘီ (Junko Abe), မာယူ ဆူရူတာ (Mayu Tsuruta)
ဒါရိုက်တာ: ကိုဂျီ ဖူကာဒါ (Koji Fukada)
၂။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတော့ပြောင်းလဲမပစ်နိုင်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းတော့ ဆောက်ပေးချင်တယ် (၂၀၁၁) We Can’t Change the World. But, We Wanna BuildaSchool in Cambodia (僕たちは世界を変えることができない。), 2011
‘တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတော့ပြောင်းလဲမပစ်နိုင်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းတော့ ဆောက်ပေးချင်တယ်’ ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ လူငယ်သလောက် အိပ်မက်တွေအကြီးကြီးနဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေသီကုံးထားတဲ့ ဆေးကျောင်းသားလူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးအပေါ် အခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေလေ့လာနေရပေမယ့် ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက် မယ်မယ် ရရမရှိသလိုဖြစ်နေတဲ့သူဟာ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်ဖို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်အားပေး တွေလိုနေကြောင်း လက်ကမ်းကြော်ငြာကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူရှာနေတဲ့ အသင့်တော်ဆုံးအဖြေကိုတွေ့ရှိ သွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စိတ်ပါလက်ပါ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ မြှုပ်ကွက် ကလေးတစ်ခုတော့ ရှိထားပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ်တိုင်ကျောင်းအတွက် ယန်း ၁.၅ သန်း ရှာပေးကြဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေ အခက်အခဲပေါင်းစုံကြုံတွေ့ကြရပြီး လောကကြီးဟာ သူတို့အရင်က ထင် ထားသလို လွယ်ကူရိုးရှင်းလှတာမဟုတ်ဘဲ ဂျပန်နိုင်ငံမှာနဲ့ သိပ်ကိုကွာခြားနေပါလားဆိုတာကိုလည်း နားလည်လာကြ ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းလေးဆောက်ပေးဖို့ ကိုတာနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဇွဲမလျှော့ဘဲအောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ကြမ လား ဒါမှမဟုတ် လမ်းခုလတ်မှာပဲ လက်မြှောက်သွားကြမလားဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်: အိုဆာမူ မူကိုင် (Osamu Mukai), တိုရီမက်ဆူဇကာ (Tori Matsuzaka), တက်ဆုကု အီမိုတို (Tasuku Emoto), မက်ဆာတာကာ ကူဘိုတာ (Masataka Kubota)
ဒါရိုက်တာ: Kenta Fukasaku
၃။ ရေကူးကန် (プール), 2009
င်ငံတကာအမြင်ရှိတဲ့အဖွဲ့သားတွေဦးဆောင်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေအစုံအလင်နဲ့ ရေကူးကန်ဇာတ်ကားမှာ အတူတူတွဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ဟယ်လင်စကီး မှာ ‘လမ်းဘေးထမင်းဆိုင်လေး ကာမိုမီ’ (Kamome Diner) လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသေး တယ်။ အခု ‘ရေကူးကန်’ ဇာတ်ကားကိုတော့ အဲဒီနေရာနဲ့ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းစာလောက်ဝေးတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကလှပတဲ့ ချင်းမိုင်မြို့လေးမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၆ ရက်စာလောက်ကိုသာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဇာတ်ဆောင်အမျိုးသမီးဖြစ်သူ ကယိုကို (Kyoko)က ထိုင်းမှာနေလာတာ ၄ နှစ် လောက်ရှိနေပြီး တည်းခိုရိပ်သာလေးတစ်ခုဖွင့်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့သမီး ဆာယို (Sayo) ကတော့ သူ့ဆီကို ထူးထူးခြားခြား အကြောင်းရှိမှသာ လာတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီကလေးမလေးက သူ့အမေပေါ်ထားတဲ့အ မြင်တွေမှားယွင်းဖို့ဖြစ် လာပြီး ဒီထဲမှာမှ အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေက ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းအား ဖြည့်ပေးနေကြပြန်ပါတယ်။ ဒီဇာတ် ကားကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သံယောဇဉ်တို့ကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ မေတ္တာဘွဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သလို ၆ ရက် ဆိုတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲ အခြေအနေတွေဘယ်လိုထိအောင် ပြောင်းလဲခဲ့ကြသလဲဆိုတာကို ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်: ဆာတိုမီ ကိုဘာယာရှီ (Satomi Kobayashi), ရိုကာဆီ (Ryo Kase), ကာနာ (Kana), မာဆာကို မိုတိုင် (Masako Motai)
ဒါရိုက်တာ: (မီကာအိုမိုရီ) Mika Omori
အခုပြောခဲ့တာတွေက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးထဲကမှ ဇာတ်ကားသုံး ကားပဲရှိပါသေးတယ်။ နောင်အနာဂတ်ရဲ့ အနုပညာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာ ဒီထက်မက ပေါ်ထွက်လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
လီဆာဝေါ်လင် (Lisa Wallin) ရေးသားသည်